Layliyo iyo Tababar - Vondt.net - Bogga 34 ee 34
BOOK Magacaabid (Raadi Xarun Caafimaad)
fibromyalgiMaqaallada ku saabsan Fibromyalgia Fibromyalgia waa cillad xanuun joogto ah oo caadi ahaan bixisa aasaaska dhowr calaamado kala duwan iyo calaamado caafimaad. Halkan waxaad ka akhrisan kartaa wax badan oo ku saabsan qodobbada kala duwan ee aan ka qornay cilladda xanuunka daba dheeraatay ee fibromyalgia - mana aha ugu yaraan nooca daaweynta iyo is-cabbirka loo heli karo baaritaankaan. Fibromyalgia waxaa sidoo kale loo yaqaannaa rheumatism-ka unug jilicsan. Xaaladdu waxay sababi kartaa calaamado sida xanuun joogto ah oo ku dhaca murqaha iyo kala-goysyada, daal iyo niyad jab.
Cuntada iyo CunnadaMa xiisaynaysaa saamaynta cuntadu ku leedahay caafimaadkaaga? Halkan waxaad ka heli doontaa qodobbada ku jira qaybta cuntada iyo cuntada. Cuntada waxaan ku dari karnaa maadooyin loo adeegsado karinta caadiga ah, geedaha, dhirta dabiiciga ah, cabitaanka iyo suxuunta kale.
Jimicsiga iyo Jimicsiga
Kaydinta Qaybta: Jimicsiyada iyo Tababarka
4ta jimicsi ee ugu xun garbaha
12 / 10 / 2016 /0 Comments/i tayada Articles, Jimicsiga iyo Jimicsiga, Jimicsiyada xoog, tababarka/av waxyeelladayda
4ta jimicsi ee ugu xumaa ee garbaha iyo muruqyada wareega
Ma waxaad la halgameysaa xanuun garabka ah? Markaa waa inaad iska ilaalisaa afartaan layli! Jimicsiyadan ayaa sii xumeyn kara garabka xanuun waxayna u horseedi karaan dhaawacyo. Xor ayaad u tahay inaad la wadaagto qof leh dhibaatooyinka garabka. Ma haysaa talo soo jeedin dheeri ah oo ku saabsan laylisyo waxyeello u geysan kara garbaha? Ii sheeg qeybta faallooyinka ee qeybta hoose ee maqaalka ama at Facebook.
Jimicsigu inta badan wuu wanaagsan yahay - laakiin sida dhammaan waxyaabaha suurtogalka ah, sidoo kale waa suurtagal in qaladkan la sameeyo. Waxaa jira jimicsiyo gaar ah oo kuxiran sii xumeynta xanuunka garabka iyo dhaawaca murqaha muruqyada wareega. Muruqyada wareega waxay yihiin qalabka taageerada ugu muhiimsan ee garabka - kani wuxuu ka kooban yahay supraspinatus, infraspinatus, teres small iyo subscapularis. Tababar qaldan ama shaqo soo noqnoqod leh oo ka sarreysa dhererka garabka, muruqyadan way dhaawici karaan ama xitaa kala bixi karaan. Waa kuwan 4 jimicsi oo ay tahay inaad iska ilaaliso haddii aad leedahay garabka oo xanuuna. Dabcan, waxaa jira dhowr jimicsi oo noqon kara layliyo xun, laakiin halkan waxaan ku soo xulnay afar qaybood. Waxaan tilmaameynaa inay tahay dil khalad ah oo aan ugu horeyn diirada ku saareyno qodobkaan - tanina waa xulasho layliyo badan oo qaladaad sameeya iyagoon lahayn muruqyo xasiloon oo si fiican u tababaran. Waxaad ka heli doontaa beddello wanaagsan oo jimicsi ah haddii aad dhibaatooyin garabka ah qabtid iyada.
1. Saxaafadda Bench
Bench press waa layli dul dhigaya dalabaadka sare xasiloonida garabka iyo xakameynta murqaha gaarka ah. Layligu wuxuu u horseedi karaa dhaqdhaqaaq xiran, xakameyn la'aan iyo xad-dhaaf ah oo ku yaal garabka wadajirka ah (isku-xirka glenohumeral) kaas oo culeys / culeys aan caadi aheyn saaraya muruqyada wareega. Kuwani waa layliyo aan la xakamayn oo waqti ka dib u horseedi kara culeys iyo dhaawac, waxaana loo tixgeliyaa mid ka mid ah sababaha ugu badan ee dhaawacyada garabka. Dad badan ayaa u maleynaya in kursiga keydku yahay jimicsi qof kastaa sameyn karo, laakiin run maahan haba yaraatee - waxay u baahan tahay inaad horeyba u laheyd xasilooni aad u wanaagsan oo aad xakameyso murqaha; waxaana markaa loo tixgelin karaa layli loogu talagalay kuwa horumarsan oo keliya.
Jimicsi aad u caan ah oo aad loogu isticmaalo jimicsiga maalinlaha ah. Mar labaad, waxaan ku laabaneynaa dhaqdhaqaaq aan la xakamayn oo ballaaran (oo aan u malayno inaadan lahayn xakamaynta muruqyada xad dhaafka ah) halkaasoo garabka garabka si wada jir ah u soo gudbinaya inta lagu jiro fulinta jimicsiga - oo ku daraya a culeys aad u sarreeya oo ku yaal dhinaca hore garabka iyo muruqyada garabka shaqsiyeed. Xanuunka garabka hore? Ka fogow tan iyo raadso jimicsiga. Talada aan siinayno ee ah inaan la sugno jimicsiga DIPS badanaa waxay khuseysaa Ola iyo Kari Nordmann, maadaama tani ay tahay jimicsi aad u adag in si sax ah loo qabto - laakiin waxaan sidoo kale isku raacsan nahay inay yeelan karto saameyn wanaagsan oo tababar ah haddii si sax ah loo qabto. Dhibaatada kaliya ayaa ah in dadka badankood ay khalad ka dhigaan - sidaasna ay u yeeshaan garabka xanuun muddo kadib. Qaar ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee ay tahay inaad maskaxda ku hayso haddii aad jimicsiga samaynaysid waa inaysan dhaafin 90 darajo, iyo sidoo kale inaad hubiso in booska madaxaagu uusan horay u sii jeedin.
3. Lulid qotodheer (Flyes)
Deep dumbbell lulid sida loogu yeero Old Norse - oo laga yaabo inay dadka badankood u yaqaanaan flye - waa jimicsi runti garbahaaga dhigaya meel banaan. Hoos u dhigista miisaanka oo aad u fogaa waxay sababaysaa garbaha oo la rogrogo oo loo jiheeyo meel ay ku yaalliin kuwa ugu nugul - ku dar culeys culus oo dheeri ah ka dibna waxaad heysataa cunto karinta garabka xanaaqsan ama dhaawacmay. Xoojintaan waxaa lagu sameyn karaa siyaabo kale boosas aan yareyn, tusaale ahaan laastikada tababarka ama mashiinka miskaha.
4. Jiiditaan taagan
Tusaale kale oo jimicsi ah oo ku dhammaada meel bannaan oo garabka ah. Jiidashada joogtada ah waxaa caadi ahaan lagu sameeyaa barbells ama kettlebells. Marka miisaanka kor loo qaado habkan, garbaha ayaa loo rogi doonaa gudaha waxayna dalabyo aad u sarreeya saari doonaan muruqyada xasilloonida ee wareegga - xasillooni ay in yar oo naga mid ahi leeyihiin. Natiijadu waa boos garabka oo culeyskiisu badan yahay oo qaawan kaas oo saldhig u noqon kara waxa loogu yeero "cilladda cillad -darrada" halkaas oo dhaawacyada garabka ay u horseedaan qanjaruufo gudaha garabka laftiisa.
Xor ayaad u tahay inaad nala soo xiriirto YouTube eller Facebook haddii aad qabtid su'aalo ama wixii la mid ah oo ku saabsan jimicsi ama murqahaaga iyo dhibaatooyinka kalagoysyada. La tasho daaweeyahaaga (lafopractor, jimicsiga jirka ama dhaqtarka) haddii ay qiyaasaan in la joogo waqtigii aad kubilaabi lahayd layliyo qaas ah iyo layliyo ay kugula talinayaan.
Waxaan kugula talineynaa inaad isku daydid jimicsiyadan sidii bilow bilow ah:
Isku day kuwan hadda: - 5 Jimicsi Wanaagsan oo loogu talagalay Garbaha Nabarrada
Alaabada lagu taliyay ee xanuun joojinta
Biyo-qabeyaha (Qabow / shukulaatada)
PAGE xiga: - Garab xanuun? Waa inaad tan ogaataa!
Sidoo kale aqri: - AU! Miyaa xanuun soo daahay mise dhaawac soo daahay?
Sidoo kale aqri: - 8 talo fiican iyo talaabooyin looga soo horjeedo sciatica iyo sciatica
Maqaalka caanka ah: - Daaweynta Alzheimer-ka cusubi waxay soo celisaa shaqadii xusuusta oo buuxda!
Sidoo kale aqri: - 5-ta jimicsi ee ugu xun hadaad prolaps leedahay
Ma ogtahay in: - Daaweynta qabow waxay yareyn kartaa xanuunka xanuunka iyo kala goysyada murqaha? Waxyaabaha kale, Biyo qabe (halkan waad ku dalban kartaa), oo ka kooban inta badan alaabada dabiiciga ah, waa badeecad caan ah. Nagala soo xiriir maanta boggayaga Facebook haddii aad su'aalo qabtid ama aad u baahan tahay talooyin.
- Ma dooneysaa macluumaad dheeri ah ama waxaad qabtaa su'aalo? Weydiiso bixiyahayaga daryeelka caafimaad ee aqoonta u leh si toos ah (gebi ahaanba bilaash ah) annaga oo adeegsanaya annaga Facebook Page ama iyada oo loo marayo “Weydii - Hel Jawaab!"-Spalte.
VONDT.net - Fadlan ku casuun asxaabtaada inay jecel yihiin bartayada:
Waxaan nahay mid adeeg lacag la'aan ah halkaasoo Ola iyo Kari Nordmann ay uga jawaabi karaan su'aalahooda ku saabsan dhibaatooyinka caafimaad ee muruqyada - gabi ahaanba qarsoodi ma aha haddii ay rabaan.
Fadlan ku taageer shaqadeena adoo na soo raacaya isla markaana nala wadaagaya qoraaladayada ku saabsan warbaahinta bulshada:
- Fadlan raac Vondt.net on YouTube
(Raac oo faallo ka bixi haddii aad rabto inaad noo sameyso muuqaal leh leylis gaar ah ama sharrax ka bixinaya arrimahaaga)
- Fadlan raac Vondt.net on Facebook
(Waxaan isku dayeynaa inaan ka jawaabno dhammaan farriimaha iyo su'aalaha 24 saac gudahood. Waad doorataa inaad ka rabto jawaabaha dhakhtarka loo yaqaan 'chiropractor', kansarka loo yaqaan 'chiropractor', jimicsiga jimicsiga jirka, jimicsiga jir ahaaneed oo ay weheliso sii wadashada waxbarashada ku daweynta, takhtarka ama kalkaalisada) Waxaan kaloo kaa caawin karnaa inaad kuu sheegto jimicsiga. kaas oo ku habboon dhibaatadaada, kaa caawinaya inaad hesho daaweeyeyaal kugula taliya, turjuma jawaabaha MRI iyo arrimo la mid ah.
Sawirro: Wikimedia Commons 2.0, Hal-abuurnimo Halgan, Freestockphotos, KOTG, FreeMedicalPhotos iyo tabaruc akhristaha la gudbiyay.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Benkpress.jpg?media=1648573622 467 700 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-10-12 08:58:252016-10-12 10:11:584ta jimicsi ee ugu xun garbaha
Jimicsiyada iyo tababarka loogu talagalay garaacidda qoorta iyo dhaawacyada qoorta.
06 / 09 / 2014 /0 Comments/i daaweynta, Jimicsiga iyo Jimicsiga, tababarka/av waxyeelladayda
Qoorta garabka, oo sidoo kale loo yaqaan 'whiplash ama whiplash (af dheenish), ayaa isla markiiba beddeli kara xaaladdaada caafimaad iyo nolosha. Hal dhaawac oo keliya ayaa ku filnaan kara inuu keeno xanuun qoorta oo muddo dheer, madax xanuun afka ilmagaleenka ah, muruqa muruqyada u dhaw iyo tayada nolosha oo hoos u dhacday. Nasiib wanaagse, waxaa jira waxyaabo aad adigu naftaada sameyn karto, marka lagu daro daaweynta ku habboon, si aad naftaada u sii ogaatid. Waxaan ka hadlaynaa jimicsiyo gaar ah iyo tababar halkan, laakiin marka hore aan si kooban u eegno waxa ay qoortu runtii yihiin.
Neck - qaybta dambe
Sababta qoorta ayaa ah dardargelinta afka ilmo-galeenka ee degdegga ah oo ay ku xigto hoos u dhac degdeg ah. Tan macnaheedu waa qoorta ma haysato waqti ay ku 'difaacdo' sidaas darteedna farsamadan meesha madaxa gadaal iyo gadaal looga tuuro waxay u horseedi kartaa dhaawac muruqyada, seedaha iyo muruqyada qoorta dhexdeeda. Haddii aad isku aragto astaamo neerfaha sababa shil noocaas ah (tusaale xanuun gacmaha ku haya ama dareen ah hoos u dhac ku yimaadda gacmaha), la xiriir waaxda gurmadka degdegga ah ama xirfadlayaal daryeel caafimaad oo u dhigma isla markiiba.
Daraasad la magac baxday 'The Task Force Task Force' ayaa uxirneyd qoorta ilaa 5 qaybood:
· Fasalka 0: majiro qoorta, adkaanta, ama astaamo muuqaal ah lama dareemayo
· Fasalka 1: cabashooyinka qoorta ee xanuunka, adkaanta ama jilicsanaanta oo keliya laakiin calaamado muuqaal ah maahan dhaqtarka baaritaanka.
· Fasalka 2: cabashooyinka qoorta iyo takhtarka baaraya ayaa ogaanaya inuu jiro hoos udhaca dhaqdhaqaaqa iyo jilicsanaanta qoorta.
· Fasalka 3: cabashooyinka qoorta oo lagu daro calaamadaha neerfaha sida hoos udhaca taranka oo yaraada, daciifnimo iyo yaraanta dareenka.
· Fasalka 4: cabashooyinka qoorta iyo jabka ama kala-baxa, ama dhaawaca laf-dhabarka.
Badanaa kuwa ku dhaca fasalka 1-2 ayaa leh natiijooyinka ugu fiican daaweynta muruqyada. Fasalka 3-4 wuxuu xaalada ugu xun u horseedi karaa dhaawacyo joogto ah, sidaa darteed waxaa muhiim ah in qofka qoorta dhaawac ka soo gaarey ay shaqaalaha ambalaaska ay isla markiiba baaraan ama la tashadaan qolka gurmadka.
Daaweyn iyo baaris ka hel xirfadle daryeel caafimaad oo aqoon leh, ka dibna ku heshii sida ugu fiican ee adiga kugu habboon adiga oo u maraya tababar habboon iyo jimicsi gaar ah. Dhaqtarka Mark Frobb (MD) ayaa qoray buuga 'Badbaadinta Whiplash: Badbaadinta Qoortaada Adigoon Maskaxdaada lumin', taas oo aad loogu talin karo haddii aad rabto jimicsi wanaagsan iyo talo wanaagsan oo ku saabsan habka loo socdo. Guji xiriirka kore haddii aad rabto inaad waxbadan ka akhriso buuggaas.
Sidoo kale akhri: - Xanuun qoorta
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/nakke.jpg?media=1648573622 599 404 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2014-09-06 22:45:272014-09-06 22:45:27Jimicsiyada iyo tababarka loogu talagalay garaacidda qoorta iyo dhaawacyada qoorta.
Bogga 34 ee 34«<323334
Vondt.net waa goob caafimaad oo loogu talo galay kiliinikada Vondt ee ku saabsan cilladaha muruqyada ee ay maamulaan xirfadleyaasha caafimaad ee idman.
Rugaha Caafimaadka ee Bukaanka waa shabakad xirfad-yaqaan ah, oo leh 60000 oo raacsan, oo leh rugo caafimaad oo khibrad u leh cilladaha muruqyada. Waxaad ka heli kartaa mid ka mid ah xarumahayaga caafimaad ama xarun caafimaad oo kugula talisa meesha kuugu dhow adiga oo leh xiriiriyaha "FIND A CLINIC".
Ma rabtaa qiimeyn iyo in lagaa caawiyo xanuunkaaga? Riix iyada si aan u aragno rugaha caafimaad ee nala shaqeeya iyo bahwadaagtayada.
Categories Xullo qeybta Daaweyn kale Annet Cudurka lafaha (Osteoarthritis) Sharoobada Autoimmune daaweynta English ergonomics fibromyalgi cilmi foot daaweynta dabiiciga ah General martida Post curcurka Caymiska caafimaadka Wadnaha iyo xididdada wadnaha Head hip Xaaladaha Maqaarka lafdhabarta jilibka Cuntada iyo Cunnada supplements Xanuun joogto ah Daal joogto ah / ME tayada Articles Reader Su'aasha Daawo Murqaha iyo Skeleton qoorta nno dareemayaasha Jimicsiga iyo Jimicsiga laabotooyinka Soo noqo disorders Jimicsiyada xoog Dawakh iyo Cudurka Crystal Cudurada iyo Baadhitaanada iskala Layliyo tababarka Uncategorized Daal iyo daal
Xuquuqda daabacaadda - Vondt.net